အိပ်မရလို့ ဆိုပီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စာတတန် ပေတတန်ရေးကာ အတန်ရှည်ရှာလိုက်ပြန်တဲ့ ယုန် – Shwe Likes
အိပ်မရလို့ ဆိုပီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စာတတန် ပေတတန်ရေးကာ အတန်ရှည်ရှာလိုက်ပြန်တဲ့ ယုန်
အိပ်လို့လည်းမရ ပါဘူးကွာကဲ ဘယ်နေရာက ဘယ်လိုပါပေးရမလဲေြ ပာအဖြေတော့လို တယ်နော်မှန်ကန် တဲ့အဖြေဖြစ်ပါစေဆဲနေ တာအဖြေမဟုတ်ဘူးနော်မုန်း တီးရေးကအဖြေမဟုတ်ဘူးနော် အမေစုကိုအေးချမ်း ချမ်းပြန်မြင်ရ ဖို့ကအဖြေနော်.အမေစု ကိုကျွန်တော်ယု န်လေးချစ်ပါတယ် ဆိုတာပါးစပ် ကအမြဲတန်း ပြောပြီးသားနော်
Post တွေဘာမှမဖြတ် ထားဘူး NLDေ အာင်ပွဲခံေ နတဲ့ ၁၁ လပိုင်း ၁၀ ရက်လား ၁၁ လား ၁၂ ရက်လားတစ်ခုခုပဲ NLD ရုံးရှေ့ အပြန်လမ်းမှာ NLD လူအုပ်နဲ့တိုးတယ် Live မဖြတ်ထားဘူး နော် Mandalay တာကျိုးတဲ့ အချိန်တင်ထားတာေ တွစည်း လုံးရေးကို လူံ့ဆော်ထားတာ ငြိမ်းချမ်းေ ရးကိုလူံ့ဆော်ထား တာတွေမဖြတ်ထားဘူး
ICJ သွားတဲ့အ ချိန်ဝန်းရံထားတယ်အေ မ့ကိုချ စ်တယ် NlD ကို တော့မထောက်ခံဘူး ဆိုတာ Post မဖြတ် ထားဘူးအဲ့မှာ မင်းတို့ ထပ်ဆဲဦးမယ် လီးမို့ NLD မထောက်ခံတာလားလို့ အမေစုကိုချစ်တာအမေ့ကိုချစ်တာလေ NLD ကလူပေါင်းစုံပါ တာငါချစ်ချင်မှချစ်မှာေ ပါ့မထောက်ခံတာဆန့်ကျ င့်တာလည်း မဟုတ်ဘူးမင်းတို့သာကိုယ့်ကိုမထောက်ခံရင်ဆန့်ကျင်တယ်လို့ထင်နေတာ
မင်းတို့ပြောတော့ဒီမိုကရေစီဆိုဟိုတစ်ခေါက် စည်းလုံးရေး သီချင်းကိစ္စမှာုင်းဆဲကျတယ် စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှေ့ဆက်မယ့်ဘဝတွေပါဝိုင်းသတ်ကျတယ်အနီလော်ဘီတွေနဲ့ တစ်ချို့နိုင်ငံရေး ဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်ကြောက်သွားတယ် ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်သီချင်းကိစ္စ နောက်ဆုံး LiveAug7မဖြတ်သေးဘူး ဒီတိုင်းထားထားတယ် Aug 6မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ပက်သက်ရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်ဘက်မှမပါဘူးကြောက်သွားပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့တုန်းကလဲဆဲတယ်
အခုကိုယ်ချစ် တဲ့လူဒီလိုဖြစ်တော့စိတ်မကောင်းြ ဖစ်ရတာတစ်ကြော င်းဘာမှနားမလည်တဲ့ကိစ္စ မသိလို့ဝင်မပါတာထ ပ်ဆဲတယ် မင်းတို့တွေကဘာလဲ Fb မှာအော်မနေနဲ့ထောင်ထဲအတူဝင်ကျမယ်လာ ဒီအချိန်ကျရင်တော့ နှစ်အကန့်သတ်မရှိပဲFb မှ မအော် နဲ့လာထွက်မယ် ဘယ်ကိုထွက်လာရမလဲလူမိုက်ပါဆိုတဲ့ကောင်တွေနဲ့ ဒဲ့တိုးမလားစောက်ဂရုကိုမစိုက်တာမင်းတို့စငြော်ပြီးအဲ့ကျမှမပြေးကြေး နော်
Music Videoကဖြစ်စေချင် တဲ့ဆန္ဒကိုရိုက်ခဲ့ တာဒီလိုပေါင်းရင် ကောင်းမ ယ်ဒါကိုရိုက်ခဲ့တာဖြစ်မယ့်အရာကိုကြိုမှန်းနိုင်ရအောင် ငါအကြားမြင်ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဒီ အချိန်တကယ်ဖမ်းနေပြီဆိုတာအကုန်သိတယ်အရေးပေါ် အခြေနေ Fb မှာတစ်ဖတ်စွန်းရောက်ဆဲဆိုနေတဲ့လူတွေလည်း ဖမ်းချင်ရင်ဖမ်းနိုင်တယ်
ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုစော က်ကြောက်လို့ ထင်ရင်အခုထွက်ခဲ့မယ် .ဘယ်ထွက်ခဲ့ရမလဲပြောအယ်မှာလိုရာထပ်ဆွဲမယ်ယုန်လေးစတဲ့ နောက် မပါကျပါနဲ့ သူကအရေးခင်းဖြစ်အောင်စနေတာဆိုပြီးလော်ဘီတစ်ချို့နည်းတစ်မျိုးနဲ့ ထပ်ပတ်မွှေဦးမယ် မအေလိုးတွေမင်းတို့သူေ တာင်းစားလော်ဘီအကွ က်တွေကြိုသိပြီးသား ဘာလုပ်လုပ်ဆဲပြီး သား လူတစ်ယောက်ကို ဘာလုပ်လုပ်အမှန်မရှိအောင်ဂျောင်ပိတ်ရိုက်တာ ဘယ်သူ့မှ မထွက် ရင်လဲငါ့စကား နဲ့ငါအမေ့စုပုံပါတဲ့အကျီတွေဒီအချိန်မရောင်းလောက်တော့ဘူး
အမှတ်တရအေ န့နဲ့လက် မှတ်ပါတဲ့အကျီ လေး၂၀၁ ၃တုန်းကအကျီ ပြန်ရှာကြည့်လိုက်မယ်မရှိရင်လည်းအနီဝတ်ပြီးတစ်ကောင်ထဲထွက်လာပေးမယ်liveလွှင့်ပေးမယ်ငါတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး.စတေးမူ့တစ်ခုလိုသဘောထားတယ် အဲ့ဒါပရိတ်သ တ်တွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးစပြီး ဦးဆောင်တဲ့မီးမွှေးတဲ့ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်းမဖြေရှင်းတဲ့လော်ဘီနဲ့အကောင့်တုသိန်းနဲ့ ချီကိုင်ထားတဲ့လူတွေရိုးသားတဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို ချယ်လည်နေတဲ့လူတွေနောက်ဒါမျိုးမလုပ်ဖို့ပဲတောင်းဆိုတယ်
ပရိတ်သတ်တွေ ထဲမှာတစ်ချို့ေ တွငယ်ရွယ်တဲ့ လူတွေ ရှိတယ် ကိုယ်ပိုင်အသိ ညဏ်နဲ့အမှားအ မှန် အဖြေ မရှာတတ်သေးတဲ့ လူတွေရှိတယ်စလိုက်တာနဲ့အဖြေမဟုတ်တဲ့အမှားကြီးကိုသွေးဆူပြီးလိုက်တတ်တယ်အားလုံးဘာလုပ်လုပ်စဉ်းစားစေချင်တယ်
၅ နှစ်လုံးလုံး တပ်မတော်ကို နည်းပေါင်းစုံ နဲ့ USDP ကိုလည်း နည်းပေါင်းစုံ နဲ့ PPP ကိုနည်း ပေါ င်းစုံနဲ့ အရောင်းမတူသူတိုင်းကို ပေါင်းစုံဆဲ ခဲ့တာ အဖြေလား ငါ့ကို ဘာမှ မလုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့စ ည်း တွေကို ငါအမုန်း မရှိဘူးလေ မင်းတို့လို လိုက်မမုန်းလို့ ငါ့ကိုဘောမဆိုတော့မအေလိုး လော် ဘီတွေ မင်းမေသာ မင်းတို့လိုးလိုက်တော့
လောဘီ နဲ့ Blame နဲ့ လဲ မတူပြန်ဘူး .Blame တာ အပျော်သက်သက် . ဒါပေမယ့်စဉ်းစားပါ . BLAME တဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေလည်းအခု နိုင်ငံပါ ထိပြီ အဲ့ဒါ ကောင်းလား အမုန်းတရား တွေ စလူံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ လူများ ကိုယ့်လုပ်ရပ် မှန်ခဲ့ သလား စဉ်းစားပါ
နောက်တစ်ချက်မင်းတို့ ဆဲ ဆိုပြီး လာလာဆွနေတာနော် .ငါ့ကိုမှ မဟုတ်ဘူး . အနီ မချိန်းတဲ့ အနုပညာရှင်တိုင်းကို အဲ့ဒါက ရောအဖြေလား . အစ်ကို မချိန်းဘူးလား
အစ်မ မဝန်းရံ ဘူးလား လေသံမျိုး မဟုတ်ဘူးနော် ပရိတ်သတ်ရဲ့ ထမင်းကို စားပြီး ဘာညာ အခုချိန်းစမ်း ဆိုတဲ့ ပုံစံ နဲ့ အမိန့်ပေးတဲ့ လေသံ နဲ့ ပြောဆို ဆဲဆိုပြီး ချိန်းခိုင်းတယ် အနုပညာရှင်တွေ တော်တော် များများက ပရိတ်သတ်ကို ကြောက်တယ်
ငါကိုယ်တိုင် လည်း ကြောက်တယ် . ချစ်တယ် .ဒါပေမယ့် စပြီး ဦးတည် ဆဲ ဆိုတာ ပရိတ်သတ် အစစ်တွေမဟုတ်ဘူး . နိုင်ငံကို ဖြတ်နေတဲ့ လော်ဘီ အကောင့် အတု နဲ့ ကိုယ်မေကိုလိုးတွေ အမေ့ကို အခုလို ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာတစ်ဖတ်ပိတ် လော်ဘီ မအေလိုးတွေပဲ FB Fake Acc ပေါင်းများစွာ ကိုင်ထားတဲ့ လူတစ်စုတွေပဲ
အခု Live နဲ့ သွားမယ့်နေရာကို လွှင့်ပေးမယ် .Videoကို အတို အစတွေ ထပ်ဖြတ်ညပ်လုပ် လိုရာဆွဲတင်ဦးမယ် . ဒါတွေက နိုင်ငံကောင်းနိုင်မယ်ဆို ဆက်လုပ် .ဟိုလူကို ဆဲ ဖို့ ဦးဆောင် ဒီလူကို ဆဲဖို့ ဦးဆောင်ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူတိုင်း ဆဲဖို့ ဦးဆောင်ဒါတွေ ကောင်းတယ်ထင်ရင် ဆက်လုပ်UN ကိုခေါ်တယ်
ဟိုက လာရင် လေကြောင်းက လာမှာ တန်းပစ်မှာ . ငါတို့ မြို့စစ်မြေပြင် ဖြစ်မှာ .ငြိမ်းချမ်း မူ့ နဲ့ အဆင်အပြေဆုံး အဖြေကို ရှာတွေ့နိုင်ပါစေ . Fb ကို အကျိုးမရှိတဲ့ ဘက်ကကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ ပိုအသုံးချခဲ့ကျတယ် .ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆဲမယ် ဆိုတာတွေ ပဲ ရှေ့တန်းတင်ခဲ့တယ်
တစ်ချို့ အနုပညာရှင်တွေလည်း တစ်ချို့ကိုပဲပြောတာနော် .အနုပညာဆိုတာ အနုပညာ လုပ်ဖို့ အနုပညာကျတော့ ဘာမှ မလုပ်တတ် Like များရင်ပြီးရော .NLD ပုံရိပ်ကို အတန်းရှင် ယူခဲ့ ကျတယ် ၅ နှစ်လုံးမှာ မကြိုက်ဆုံးအချက်က အမှန် တရားမရှိဘူး Acc များရင် နိုင်တယ် . Fb နဲ့ အုပ်ချူပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်နေတယ်
နောက် နာစီဝက် ထွက်မယ် Live လွှင့်ပေးမယ် ကျွန် တော် နား ဘယ်သူ့မှလည်း ဝန်းရံတယ်ဆိုပြီး အနားမလာ နဲ့ အနားကပ်ရင် အကုန်ဓား နဲ့ထိုး မှာဒီ အချိန် ဘယ်သူ့မှ မယုံဘူး ပူးသတ်တဲ့ လူလည်း ဖြစ်နိုင်ချင်ဖြစ်မှာ
ကာလက မရိုးရှင်း ဘူး ကျွန်တော် ချစ်သော လူများ တစ်ယောက်မှ လာမဝန်းရံပါနဲ့ အနားလာကပ်ရင် ရန်သူပဲ .မိတ်ဆွေ ရန်သူ ကွဲနေအောင် မလာပါနဲ့
ကျွန်တော်တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင်တော့ နောက်အဲ့လို ဦးဆောင်တဲ့နောက်ကို မလိုက်ကျဖို့ .ကျွ န် တော့် ကို ချစ်သော .ကျွန်တော် စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန်အားပေးခဲ့သောကျွန်တော် ချစ်သော လူအယောက်စီတိုင်း ဆဲတာ အဖြေ မဟုတ်ဘူ
း အမုန်းတရားဆိုတာ အဖြေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကို လက်ခံ ပေးကျပါ အဖြေက အားလုံး စည်းလုံးရမှာပါ ချက်ချင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် .ငြိမ်းချမ်းမူ့ ကို အခုထဲက ဦးတည်ကျပါ။
ပရိတ်သတ်အချစ်တော် အူဝဲတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ စိတ်ထားကို အတွင်းကျကျသိထားတာကို ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး